हेटौंडाका इ-रिक्सा चालक मनोज साहको जीवन कथा | Mahesh Pathak
हालसालै मेरो जेठी छोरीको बिहे चपुरको (रौतहट) केटा सँग भयो। केटा पक्षले बिहेपछी छोरीलाई पढाउने सर्तमा बिहे गरेको थियो। तर बिहे गरेर पठाए पछी पढाउन मानेन। म गएर उनिहरुलाई झपारें र छोरीलाई यतै ल्याएँ। अहिले आफैंले पढाउँदै छु।
म तथा मेरो संधीको मृत्यु पछी सबै जिम्मेवारी त हाम्रा सन्तानले नै निभाउनु छ। अहिले राम्रो शिक्षा पाए भने न उनिहरुको भविस्य राम्रो हुन्छ।
हाम्रो मधेसी समुदायमा निक्कै साघुँरो सोच छ। बाबुको जे पेसा छ, सन्तानले पनि त्यही गरुन् भन्ने सोच्छन्। ओरिपरीको दवावले बच्चालाई स्कुलमा भर्ना त गर्छन्, तर ६-७ कक्षामा पुग्न नपाउँदै पढाई छुटाएर काम गर्न पठाउँछन्। यस्तो तालले कसरी उनिहरुले प्रगती गर्न सक्नु?
कमसेकम छोराछोरीलाई १२ सम्म मात्र पढायो भने पनि बाकीँ शिक्षा त्स उनिहरुले आफुले काम गरेर पनि पुरा गर्छन्। त्यती पढाउने कर्तव्य त पुरा गर्नु पर्‍यो नि बाबुआमाले!”
मनोज साह जस्तै सचेत अभिभावक सबै भैदिए अबको नेपाल साच्चै शान्त र संवृद्ध बन्नेछ।तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद मनोज साह दाइ।
← अन्तर-व्यक्ती संबन्ध राम्रो बनाउने विवेकशील मन्त्र – समानुभुती	म त एक आम नेपाली मलाई के फाइदा डा. केसीको अनशनले? →